Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » IMEX America: Tsara ny miverina!
IMEX America 2021 famaranana ny fihaonambe mpanao gazety
Taorian'ny herinandro be atao nofaritana tamin'ny fihetseham-po mahery vaika hoe “tsara ny miverina”, dia nanatevin-daharana ny filohan'ny IMEX Ray Bloom sy ny tale jeneralin'ny Carina Bauer teo amin'ny lampihazo ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety IMEX America i Steve Hill, tale jeneralin'ny LVCVA; Paul VanDeventer, Filoha sy Tale Jeneralin'ny MPI; ary Stephanie Glanzer, Chief Sales Officer & Senior Vice President ao amin'ny MGM Resorts International.
Mpividy 3,300 mahery no nanatrika tao amin'ny IMEX America tamin'ity herinandro ity ary ny ankamaroany dia nampiantrano mpividy.
Ny hetsika tao amin'ny Helodranon'i Mandalay any Las Vegas dia nahitana orinasa fampirantiana maherin'ny 2,200 misolo tena firenena 200 mahery.
Manodidina ny 50,000 ny fanendrena natao tamin'ny fanehoan-kevitra mampiseho fa niteraka orinasa matanjaka ho an'ny fampirantiana ny hetsika.
Nanamarika ny andiany faha-10 ny Ray Amerika IMEX miaraka amin'ny famerenany ny antontan'isa mahazatra momba ny raharaham-barotra tamin'ny herinandro: “Mpividy 3,300 mahery no tonga teto tamin'ity herinandro ity, nampiantrano mpividy ny ankamaroany. Nanana orinasa fampirantiana maherin'ny 2,200 koa izahay misolo tena firenena mihoatra ny 200. Manodidina ny 50,000 ny fanendrena ary ny valin-kafatra dia mampiseho fa namokatra orinasa matanjaka ho an'ny fampirantiana izy ireo. Nisongadina ihany koa ny kalitaon'ny orinasa sy ny RFP avy amin'ny fanendrena an-tongotra nataon'ireo mpividy mpanatrika. ”
Carina dia nanitatra ny fitakiana fandraharahana naseho nandritra ny herinandro. “Tena nampahery sy nahafaly ny nandre tantara maro niverina. London & Partners, namantsika eto androany, ny LVCVA, ary am-polony maro hafa, anisan'izany ny vondrona hotely toa ny Mandarin Oriental, dia samy nitatitra ny fantson'ny fandraharahana matanjaka hatramin'ny Q3 amin'ny taona ho avy sy amin'ny 2025. Ity herinandro IMEX ity dia nanome antsika ny antony rehetra hinoana ny mamirapiratra ny hoavin’ny indostria”.
Ny fihetseham-po tao amin'ny efitrano dia nitombo satria ny mpikambana rehetra ao amin'ny tontonana dia nizara tantara mahomby ary nanome voninahitra ny faharetana sy ny fahaiza-mampifanaraka ny indostrian'ny hetsika ara-barotra manerantany, araka ny nasehon'ny IMEX America tamin'ny haavony sy ny sahan'ny fampisehoana tamin'ity taona ity taorian'ny efa ho roa. taona fanakatonana ny indostria.
Fanavaozana sy fandraisana andraikitra
Toy ny mahazatra, ny IMEX America dia manolotra hetsika sy fahafahana maro ho fanampin'ny raharaham-barotra mifanatrika. Tamin'ity herinandro ity dia nisy fotoam-pampianarana maherin'ny 200, lalam-pampianarana vaovao, Village People & Planet vaovao miaraka amin'ny fisotroana ranom-boankazo sy anana “tsy mety” miampy fivoriana maharitra, faritra Tech Therapy, ary fandaharana ara-pahasalamana isan'andro izay ahitana ny #IMEXrun mahazatra amin'ny Alarobia maraina.
Ireo manam-pahaizana sy mpandahateny eran-tany, fanabeazana manokana ho an'ny orinasa, ary ireo mpitantana ny fikambanana sy ny masoivoho, miaraka amin'ny atrikasa sy fandaharan'asa ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra, no nanasongadina ny herinandron'ny fihaonana.
Namintina i Carina hoe: “Sahala amin'ny maro aminareo, ny ekipanay dia niasa mafy sy mafy mba hahatanteraka ny IMEX America 2021. Faly izahay nahafantatra fa mijery, miandry ary maniry izany ho amin'ny fiainana ianao satria misy dikany lehibe ho an'ny indostriantsika manerantany izany. Tsy ho vitanay izany raha tsy teo ianao. Ny zava-dehibe kokoa dia manao izany ho anao izahay satria mino mafy ny lanjany ara-toekarena sy ny fiantraikany tsara amin'ity indostria ity manerana izao tontolo izao izahay. Tamin'ity herinandro ity dia nanamarika fa – amin'ny fitambarany – miverina isika, ary miverina amin'ny asa. Na dia tsy tao amin’ilay efitrano aza ianao dia fantatray fa nahatsapa izany avy lavitra ianao.”
Ny datin'ny IMEX America 2022 dia nohamafisina tamin'ny 11 - 13 Oktobra, miaraka amin'ny Smart Monday, ampiasain'ny MPI ny 10 Oktobra.